Youtube Marketing: Gini mere o gha adighi! | Martech Zone
Anyị kwadoro nzukọ mpaghara nke pọdkastị na ọfịs anyị iji tụlee mmụba vidiyo na pọdkastị. Ọ bụ mkparịta ụka dị ịtụnanya - site na teknụzụ ọhụụ, nsogbu teknụzụ, na ezigbo usoro vidiyo mmekọrịta. N'ime mkparịta ụka ọ bụla, a jụrụ ajụjụ, anyị kwesịrị ịdị na-eme vidiyo? Kama nke ahụ, ọ bụ ihe niile gbasara otu anyị ga-esi gbue vidiyo iji soro ọrụ mgbasa ozi kachasị rụọ ọrụ nke ọma.
Dị ka otu pọdkastị, Chris Spangle, ọkachamara n'ihe banyere ọdịyo na vidiyo zara: Youtube bu ebe nyocha ndia. Ọ na-aga n'ihu ịbụ saịtị # 2 kachasị enyocha na-abụghị Google n'onwe ya. Ọ bụghị mmadụ niile chọrọ ịgụ blọgụ ma ọ bụ gee pọdkastị - ha chọrọ vidiyo.
Youtube bụ obodo kachasị ukwuu na-ekerịta vidiyo ụwa. Site na ọtụtụ ijeri ndị ọrụ na ọdịnaya ọhụrụ ebugoro na nke abụọ ọ bụla, ọ bụ ụlọ ọrụ ihe ntanetịime ntanetị nwere oge 10 iji ọrụ Netflix, Amazon Prime, na Hulu jikọtara. Ibe weebụ
Youtube na-etu ọnụ ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ, ihe karịrị ọkara n’ime ha si na ekwentị mkpanaaka. A na-ele ihe karịrị ijeri vidiyo anọ kwa ụbọchị na nkezi onye ọrụ na-emechi na minit 40
Youtube nwekwara ndụ-gụgharia nhọrọ na ngwa oru ndi mmadu, nke na-agbasawanye ka ọ na-arụ ọrụ iji kwado usoro ndị ahịa na - agbanwe - ebe ha kwukwara n'oge na - adịbeghị anya ike ịlele ndị ọrụ dabere na ha Omume ọchụchọ Google, uru ọzọ dị mkpa. Ọnye na -bụ Andrew Hutchinson?
WebPageFX mepụtara ihe omuma a, Ihe mere Youtube ji gbasa ahịa, ma nye usoro itoolu iji hụ na akara gị gosipụtara nke ọma na Youtube:
Jiri aha njirimara gị aha aha.
tinye Keywords ka ọwa gị aha.
Jiri isiokwu bara ọgaranya video aha.
tinye aha akara ka video aha.
Na-agbaso vidiyo gị mgbe niile Intro ma ọ bụ logo.
Jiri ya Nkwupụta Ndagide Ndị Na-ege Ntị.
update ọwa Youtube gị kwa oge.
Mepụta vidiyo n'etiti 31-60 sekọnd.
Share vidiyo gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Vidio ndị emepụtara nke ọma egosiputara ihe ngosi intro, ikwu okwu doro anya, eserese dị elu, ahụmịhe ọkachamara, ntụgharị dị ọcha, otu esi eme ihe ngosi, yana oku oku ime ihe.
Tags: footageesi vidiyontụgharịvideo oku ka omumevideo mmaọnụ ọgụgụ vidiyovidiyo vidiyoibe weebụyoutubeyoutube oku ime iheyoutube ctavidiyo vidiyo di omimiihe omuma youtubeahia ahia youtubeọnụ ọgụgụ youtubesteti youtubeyoutube video mkpebi
Sep 7, 2010 na 10:36 PM
Anyị ejirila nkọwa nke njikọ njikọta na vidiyo mee ihe n'oge na-adịbeghị anya http://www.12starsmedia.com. Ekwenyere m kpamkpam na ike ijikọ vidiyo na ibe, ọkachasị na usoro mkpọsa, na-emepe ọtụtụ ohere dị jụụ. Otu ọkacha mmasị m m hụrụ na nso nso a bụ asọmpi enyi m Steven Shattuck na CMC Media Group. Lelee ya ebe a - http://www.youtube.com/watch?v=7gdbCWikdUY
Sep 8, 2010 na 7: 26 AM
Oh n'akụkụ m !! Nso a amamiihe mmejuputa iwu! Gbalịa obere okwu ndị ọzọ dịka “nsusu ọnụ”, “ịmakụ”, “bụrụ abụ”, “ịlụ ọgụ” na ụfọdụ okwu na-adịghị mma.
Ohere na-enweghị njedebe na-agbapụta ụbụrụ m ugbu a! N'ike mmụọ nsọ iji nọrọ n'ọrụ na ngalaba WebCommercials.biz m.